China7Axis Robotic Arc Welding Workstation ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
၇ Axis စက်ရုပ် arc welding station သည်ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်ဘီး၊ လျှပ်စစ်ကား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများ၊
Robot သည်ပြင်ပ ၀ င်ရိုးနှင့်တွဲဖက်ပြီးဂဟေဆော်ရန်သင့်တော်သောရာထူးများစွာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလိုအလျောက်အတွက်, စက်မှုစက်ရုပ်အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအကြားရှိပါတယ်။ သူတို့ကအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များလျှင်မြန်စွာချိန်ညှိခွင့်ပြုသည်။ YOO HEART စက်ရုပ်အလုပ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်၎င်း၏ပစ္စည်းကိရိယာအဆင့်များသည်စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်လိုအပ်သောစက်ရုံနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဆဲလ်များအားတပ်ဆင်ရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ စံပြစက်ရုပ်တစ်လုံးအတွက်ပင်၎င်းသည်အလုပ်သမားများလက်ခံနိုင်သောစက်သေးသေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
YOO HEART7Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်သည့်စက်ရုံသည်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အလုပ်အပိုင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါကဤအလုပ်ရုံသည်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြန်ဆန်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤဘူတာတွင် ၆ လုံး ၀ င်ဂဟေဆော်သောစက်ရုပ်၊ သင်ဤယူနစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်စက်ရုပ်သည်ပလပ်ဂင်များအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အပိုင်းကိုတည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ရိုးရှင်းသောညှပ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
YOO HEART ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်သည်။ အရေးပေါ် ဦး စားပေးမှုအရဖောက်သည်များသည်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ YOO HEART စက်ရုပ်ထုပ်ပိုးခြင်းအမှုန်များသည်ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PL၊ မူရင်းလက်မှတ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အခြားဖိုင်များကဲ့သို့သောဖိုင်များအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါမည်။ အဓိကအလုပ်မှာစက်ရုပ်တိုင်းကိုဖောက်သည်ဆိပ်ကမ်းသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရက် (၂၀) ​​အတွင်းအရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုရန်သေချာစေသည့်အလုပ်သမားဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တိုင်းသည် YOO HEART စက်ရုပ်ကိုသူတို့မ ၀ ယ်မီသိသင့်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် YOO HEART စက်ရုပ်တစ်လုံးရရှိပြီးနောက်သူတို့၏အလုပ်သမားသည် YOO HEART စက်ရုံတွင် ၃ ရက် ၃ ရက်အခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် WhatsApp အုပ်စုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးနောက်၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ hard ware၊ ဆော့ဝဲလ်များစသည်တို့ပါ ၀ င်ရမည်။ အကယ်၍ ပြtwiceနာတစ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်သည်ပြcustomerနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီသို့သွားလိမ့်မည်။ ။
YOO HEART စက်ရုပ်ကိုပြင်ပဝင်ရိုးဘယ်လောက်ထည့်နိုင်လဲ။
A. ယခုလက်ရှိ YOO HEART စက်ရုပ်သည်စက်ရုပ်နှင့်တွဲဖက်နိုင်သောစက်ရုပ်အပြင်ဘက်ထပ် (၃) ခုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ င်ရိုး ၇ ရိုး၊
Q2 ။ အကယ်၍ စက်ရုပ်ကိုထပ်မံထပ်မံထည့်လိုပါကရွေးချယ်စရာရှိပါသလား။
A. သင် PLC သိလား။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုပ်သည် PLC နှင့် ဆက်သွယ်၍ အပြင်ဘက်ဝင်ရိုးကိုထိန်းချုပ်ရန် PLC သို့အချက်ပြနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ပြင်ပ ၀ င်ရိုး ၁၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုနိုင်သည်။ ဤနည်း၏တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာပြင်ပဝင်ရိုးသည်စက်ရုပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ မရနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Q3 ။ ဘယ်လို PLC စက်ရုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို?
A. ကျွန်ုပ်တို့မှာ control board မှာ i / O board တွေရှိပါတယ်။ output port ၂၂ ခုနဲ့ input port 22 ခုရှိပါတယ်။ PLC က I / O board ကိုချိတ်ဆက်ပြီး robot ကနေ signal တွေလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q4 ။ I / O port ထပ်ထည့်လို့ရမလား။
A. ရိုးရှင်းစွာဂဟေဆော်သော application အတွက်ဤ I / O port သည်လုံလောက်ပါသည်။ သင်ပိုမိုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တွင် I / O တိုးချဲ့ဘုတ်ရှိသည်။ နောက်ထပ် 22 input နှင့် output ထည့်လို့ရပါတယ်။
Q5 ။ သင်မည်သည့် PLC အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါသလဲ။
A. ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Mitsubishi နှင့် Siemens နှင့်အခြားသောအမှတ်တံဆိပ်အချို့နှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ Two Positioner နှင့်အတူ Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်